Kuphunyuke Isalukwazi Emvakokutholana Phezulu Nezinswelaboya - Gagasi World
Kuphunyuke Isalukwazi Emvakokutholana Phezulu Nezinswelaboya
Written by Mfundo on 13 October, 2021
Isaguga esineminyaka engu-64 esisinde ngokulambisa singenelwa sihlaselwa emzini waso ezintatha, sithi sisahlalele ovalweni emva kwalesigameko.
Logogo wasendaweni yase Ashdown eMgungundlovu, esingeke silidalule igama lakhe ngezizathu zokuphepha kwakhe, ungenelwe abafana ababili bamkhomba ngezibhamu base bembopha umzimba emva kokuthi elwe watholana phezulu nomunye wezigebengu.
Zigcine zimkhuleka ngoba ezihlula ngamandla.
U-Nompendulo Ngubane uyabika:
Khonamanjalo, ukwanda kwezigameko zobugebengu kulendawo sekushiye umphakathi uhlalele ovalweni ngaso sonke isikhathi.
Amalungu omphakathi akhathazekile, athi awasakhululekile ngoba abantu abadala bahlala bodwa emakhaya nokwenza ukuthi izigebengu zizicanasele ziphinde zihlukumeze umphakathi ikakhulukazi leyo mizi ehlala izaguga kuphela.
Abahlali baleli lokishi bachaza kanje bekhuluma nezindaba ze-Gagasi FM mayelana nezinselelo zobugebengu abathi babhekene nazo:
Steenhuisen Says SA Needs Saving
Amnesty SA Concerned by Lack of Basic Service Delivery